FIANGONANA LOTERENA MALAGASY
Natao izao tantara izao ho fahatsiarovana sy fampahatsiahivana ho an’ireo zandry, zanaka aty aoriana, ny niforonan’ny FLME Montpellier.
Zava‐dehibe izany satria mamerina indray, ho an’ireo mpiangona efa teo hatramin’ny fitsanganan’ny Fiangonana ; ny làlana nodiavin’izy ireo. Mitondra fanazavana sy fampahalalana kosa, ho an’izay tonga aty aoriana. Tsy izay ihany anefa ny tanjona fa ilaina ny tantara hananana jeri‐todika ny asa fitoriana nataon’ireo zoky, ray aman‐dreny teo aloha. Manome hery, fanantenana sy fijery lavitra ary ainga vao izany ho entina miatrika ny asa mbola miandry eto anivon’ny Fitandremana Montpellier.
Ireo lalana nodiavina
Nitsangana ny FLM Montpellier ny taona 1997 ary tao an‐tokantranon’i Pastora Eugène RAKOTOJAONA mianakavy no nanaovana ny fotoam‐pivavahana. Rehefa nihamaro anefa ny mpivavaka sady efa nahazo alitara, dia nitady toerana lehibe kokoa izy ireo. Tao amin’ny « la cave » ao amin’ny « Tour Hauts de Massane » no toerana hita. Ka nanomboka teo dia lasa tao no nanaovana ny fotoam‐pivavahana isan’alahady.
Tsy naharitra ela tao amin’io « la cave » io anefa satria nijery toerana malalaka hatrany nohon’ny fitombon’ny isan’ny mpiara‐mivavaka. Nifindra tany amin’ny « Rue d’Oran » indray, ary tao no nankalazana ny Krismasy voalohany sy nanaovana ny batisa voaloha ny taona 1999.
Ny mariage voalohany dia natao tao amin’ny Saint Paul, Eglise Protestante, eo akaikin’ny Lycée Mas de Tesse. Ny natao mariage voalohany moa dia ny Prezidan’ny FLM Montpellier tamin’izany.
Ny taona 2001 dia voatery tsy maintsy nitady toerana hivavahana indray ny Fiangonana Montpellier satria ny « Rue d’Oran » dia « colocation » niarahana tamin’ny « Eglise évangélique ». Rehefa niala ity farany dia tapaka ihany koa ny « contrat ». Ka tsy maintsy nitady toerana hahafahana mivavaka indray. Pastora Feroul, « Directeur de la Faculté de Théologie Protestante à Montpellier », tamin’izany fotoana, no nanome alalana, nahafahana nanao ny fotoam‐pivavahana tao amin’ny « Chapelle de la Faculté de Théologie Protestante à Montpellier » ; ary mbola mitohy hatramin’izao, ho toeram‐pivavahan’ny FLM Montpellier moa izany Chapelle izany.
Fanokanana ny Fiangonana sy fanolorana Pastora
Ny volana novambra « Advento » taona1998, no natao ny fanokanana ny Fiangonana sy ny fanolorana an’i Pastora Eugène RAKOTOJAONA hitondra ny FLM Montpellier. Tao amin’ny Fiangonana Protestanta « La Margelle » no natao ny fotoam‐pivavahana. Tonga nanolotra ny Pastora FLM Montpellier sy nanokana ny Fiangonana, i Pastora Habberstad RAKOTONDRAZAKA, izay Filohan’ny Synoda aty Eoropa amin’izao fotoana. Marihana fa mbola tsy Synoda ny FLM taty Eoropa tamin’izany, fa nantsoina hoe « Mpiandraiki‐draharaha ».
Heritaona tao aorian’ny fanokananan’ny Fiangonana dia tonga teto Montpellier, Pastora RABENOROLAHY, Filohan’ny FLM avy any Madagasikara, hanolotra an’i Pastora Eugène RAKOTOJAONA, ho Mpitondran’ny Fileovana Marseille. Notanterahina teto Montpellier moa izany fotoan‐dehibe izany.
Ireo andraikitra natrehina
Nandray voalohany, ny isa‐taonan’ny FLM aty Eoropa, ny taona 2000, ny Fiangonana teto Montpellier. Notanterahina tany Mèze ny fotoana rehetra, ka noraisin’ny mpiangona teto Montpellier ny fandaminana, ny fanatontosana sy ny fahatomombanan’ ny fivorian’ny isataona.
Teo ihany koa ny fankalazana ny isatetovolana izay niarahana tamin’ny FLM Marseille ; ka mifandimby ny fampiantranona ny fivoariana.
Ny fampianarana Soratra Masina, ny ankizy (SALOMA) dia efa nanomboka hatramin’ny nisian’ny fiaraha‐mivavaka.
Daty hafa tsara ho fantatra
1993 : Nanolorana an’i Pastora Eugène RAKOTOJAONA hitantana ny FLM France, notanterahin’ny Pastora RABENOROLAHY, Filohan’ny FLM tamin’ny fotoan’andro.